RASMI: Liverpool oo ku dhawaaqday in Firmino uu ku soo laabtay tababarka kooxdeeda kahor finalka Champions League – Gool FM
(England) 21 Maajo 2019.Liverpool ayaa si rasmi ah u shaacisay in weeraryahankeeda reer Brazil ee Roberto Firmino uu diyaar u yahay 100% inuu ka qeyb qaato tababarka guud ee kooxda ay ugu diyaar garoobeyso kulanka finalka Champions League ay kula ciyaari doonaan Tottenham Hotspur.
Liverpool ayaa kula ciyaari doonta kooxda Tottenham Hotspur finalka tartanka Champions League 1-da bisha June, kaasoo ka dhici doono garoonka Wanda Metropolitano caasimada Spain ee Madrid.
Waxaa tababarka buuxa ay maanta sameysay kooxda Liverpool lagu dhex arkay soo laabashada weeraryahanka reer Brazil ee Roberto Firmino, oo xiliyadii lasoo dhaafay la dhibtoonayay dhaawac dhanka muruqa ah, taasoo ka hor istaagtay inuu ka qeyb galo kulamada Reds.
Firmino ayaa seegay saddexdii kulan ee ugu dambeysay ay la ciyaartay Liverpool kooxaha Newcastle United iyo Wolverhampton oo ah horyaalka Premier League, iyo kulankii lugta labaad wareega afar adhamaadka Champions League ay la ciyaareen Barcelona.
Warkan ayaa ah mid aad ugu wanaagsan kooxda Liverpool iyo macalinkeeda reer Germany ee Jürgen Klopp, kahor kulanka finalka Champions League ay kula ciyaari doonaan Tottenham Hotspur.